ဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အချို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အချို့
ဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အချို့
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Aug 6, 2012 in Computers & Technology | 20 comments
မြန်မာပြည်ရဲ့ Update အဖြစ်ဆုံးလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ နာမည်ကျော် ဂျာနယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လိပ်စာကတော့ – http://www.news-eleven.com/
2. Internet Journal
နည်းပညာ သတင်းတွေ၊ ပညာရေး သတင်းတွေ ပါဝင်တဲ့ ဂျာနယ်စာစောင် တစ်ခုပါပဲ။ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့မှာ ဖြန့်ချိပါတယ်။ ဒီဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက်က အရင်ထက် အများကြီး ပိုကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လိပ်စာကတော့ – http://www.myanmarinternetjournal.com/
မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်ရဲ့ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာကတော့ …
4. Envoy Journal
Envoy ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းနိမ်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာကို မတွေ့ရပါဘူး။ Blogger နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာကိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ အမှန်တော့ ဂျာနယ်တစ်စောင်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကိုယ်ပိုင် ဒိန်မိန်းနဲ့ တည်ဆောက် ထားသင့်ပါတယ်။ ဒိုမိန်းတစ်ခုမှ တစ်နှစ်စာ တစ်သောင်း ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ Hosting မဝယ်နိုင်သေးရင်တောင် ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းနဲ့ ချိတ်ပြီး ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို ပိုပြီး ကောင်းနိုင်တာပေါ့။ ဒါက ကျနော့်အမြင်ပါ။ ဒီ Envoy ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္လာ နေ့တိုင်းမှာ ဖြန့်ချိပါတယ်။ ခုတော့ နားထားရတယ် ဆိုလားပဲ။
သူ့လိပ်စာကတော့ – http://envoy-news.blogspot.com/
ပြည်မြန်မာဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂျာနယ်ကိုတော့ အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တွေမှာ ဖြန့်ချိလေ့ရှိပါတယ်။
သူ့ရဲ့ လိပ်စာကတော့ – http://swesonemedia.org/
YangonTimes ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာကတော့ – http://www.theyangontimes.com/
7. 7Day News
အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာ ဖြန့်ချိလေ့ရှိတဲ့7Day News ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာကတော့ – http://www.7daynewsjournal.com/
8. The Voice Weekly
The Voice Weekly ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Joomla ပေါ်မှာ အခြေတည်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆိုက်မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Font ကတော့ Zawgyi-one မဟုတ်ပါဘူး။ Myanmar3 ကို အသုံးပြုထားတယ် ထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဆိုက်ကို Wide Screen မော်နီတာနဲ့ ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ 800×600 မော်နီတာ တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီး အဆင်မပြေလှပါဘူး။
လိပ်စာကတော့ … http://www.thevoicemyanmar.com/
Popular Journal ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာက .. http://popularmyanmar.com/
10. The Myanmar Post Global
မြန်မာပို့စ် ဂလိုဘယ် ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာကတော့ .. http://www.themyanmarpostglobal.com/
စောင့်ကြည့် ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာက … http://newswatchjournal.com/
Hot News ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာက .. http://www.hotnewsweekly.com/
မြန်မာနိုင်ငံ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများကို ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာက … http://myanmar.com/
ဈေးကွက် ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာကတော့ … http://www.zaygwet.com/
15. အလင်းတန်း ဂျာနယ်
အလင်းတန်း ဂျာနယ်တွေကို ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာကတော့ .. http://shweamyutay.com/
ဂျာနယ် များစွာရဲ့ စုပေါင်း သတင်းတွေကို ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် နေရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာကတော့ … http://www.yoyarlay.com/
အထက်ပါ ဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာတွေကတော့ ကျနော် သိသလောက်ပါပဲ …
NewsWatch ဂျာနယ်ရဲ့ လိပ်စာကိုတော့ update လုပ်ပေးသွားပါမယ် … (သည်းခံတော်မူကြပါကုန်)
တချို့ ဂျာနယ်တွေက Facebook မှာပဲ Page အနေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမို့ မတင်တော့ပါဘူး ..
ခုဟာကလည်း ဘာရယ်မဟုတ်၊ သိသမျှလေးကို ပြန်လည် ဝေမျှခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း …
ထို့ထက် ပို၍ သိထားပါက ပြောပြပေးကြပါရန်လည်း တောင်းဆို အပ်ပါသည် ခင်ဗျား ….
ရွာသူားအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ဝမ်းသာ လန်းဖြာ ကြပါစေကုန် ……
ကိုကိုအံရေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ .. တစ်စုတစ်စည်းထဲ တွေ့ရတော့ အထူးရှာစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ လင့်လေးတွေကို ကူးထားလိုက်ပါတယ် ..
အေးဗျာစုံလင်နေတော့ အေးအေးလူလူ ဖတ်ရသေူတာပ
စကားမစ် the voice နဲ့ envoy ဂျာနယ်တွေ ပြန်ထုတ်ခွင့်ရလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်
သိုင်းကျူး အကြီးကြီးပါ ။ ဘွတ်မတ်လုပ်ထားပါတယ် ခင်ဗျာ..
အောက်ဆုံးးးးညာဖက်က… News Media Links တွေမှာထည့်ပေးလိုက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်..
ထောက်ခံတယ်ဗျို့  …. အဲ့လို လင့်ထည့်ထားရင် တစ်ခါထည်း ထပ်သွားလို့ အဆင်ပြေတယ် …. ကွက်တိပဲပေါ့ …။ ကို အံစာတုံး ကို လဲ ကျေးဇူးပါဗျာ .. လက်မ ထောင် သွားပါတယ်။
ကျုပ် NewsWatch ဂျာနယ်ရဲ့ လင့်ခ်ကို
အင် တခါတလေ သူ့ ထက်ငါ သတင်းဦးအောင် တင်တတ်တဲ့ စဉ်းစားဥာဏ်နည်းတဲ့
ွှရင်ဆုံး ခြောက်မျက်နှာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ သူကြီးကလည်း News Media Links ထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့။
ကဲ….ငါ့အကိုပြောသလို သိထားသမျှလေးတွေထပ်ဖြည့်ပြီဗျာ….အကိုရေးပြထားတာနဲ့ တူသွားတာလည်းပါမယ်နဲ့တူတယ်……
– Planet ဖိုရမ်
– Registry အကြောင်းများသိစေရန်
– အိုးဝေ (စင်္ကာပူ)
– ဖွဲ့တည်ရာ မီဒီယာ
– ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်
– http://www.baydathukhuma.com (ဗေဒင်ပညာ)
– Book Hive Library
– Shwemingalar Search Engine
– မြန်မာ အီးဘွတ်ခ် စာအုပ်များ
– Yangon Street Art (အနုပညာ)
– Myanmar Books Catalogue
Planet ဖိုရမ် http://www.planet.com.mm/forums
Shwemingalar Search Engine
ခုလို ထပ်ဖြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျ …
mm.ebooks.mmblogs.net ကတော့ဖြင့် ခေါ်သုံးလို့ မရတော့ပါဘူး ..
ဒါက ကြာခဲ့ပါပြီ …
လျှပ်တစ်ပြတ် ဂျာနယ်ဆိုက်ကလည်း Error တက်နေပါဂျောင်း …
ထပ်ပြီး ဆောရီးအကိုရေ…အဲ့ဒိ List က ကျွန်တော်ရထားတာ တော်တော်ကြာပါပြီ….အကုန်လုံးလဲ စုံအောင်မဝင်ဖူးပါဘူးအကို….ဒါပေသိ ဝင်ကြည့်သမျှက ရနေတော့ အကုန်ရမယ်လိုထင်ထားလို့ပါ….
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ … အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ သတင်းတွေကိုအမြဲဖတ်နေကျဆိုတော့ ဒီဝက်ဆိုဒ်တွေက
မဟာရာဇာကြီးရော၊ ကိုဒေးဗစ်ရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှ ဂျာနယ်ရောင်းခြင်းအလုပ်ကို ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရန်စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိပါကြောင်း…
ဗျို့ ….. ကိုကြောင်ဝတုတ်….. ဂျာနယ်မရောင်းနဲ့ဗျာ….. ဟိုတစ်ခါတုန်းကလို “ဖုန်းကင်” (ဖုန်းလေးတွေကင်ထားတာ ပြောဘာဒယ်) ရောင်းဗျို့…..